ယေရှုခရစ်၌ရှိသော ထိုစိတ်သဘော Burmese Family Camp - S.F (2012) - Dr Ramond Mu
ကျမ်းပိုဒ်။ ။ ဖိလိပ္ပိသြ၀ါဒစာ ၂း၅-၁၁ Philippians 2:5-11
ယေရှုခရစ်၌ရှိသော ထိုစိတ်သဘောကို သင်တို့၌လည်းရှိစေကြလော့....Let the mind of CHRIST JESUS be in you.
Renewed Mind အသစ်သောစိတ်ဝိညာဉ်
Dr Ramond Mu
Burmese Family Camp (Sep 2012 - San Francisco)
လူတွေမှာ ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်ဆိုပြီး (၃)မျိုးရှိပါတယ်။ တချို့လူတွေဟာ မိမိခန္ဓာကိုယ် လိုအပ်ချက်တွေ၊ စားဝတ်နေရေး၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာများအတွက်ပဲ လုပ်ကိုင်၊အသက်ရှင်ရင်း သေဆုံးသွားကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ စိတ်အလိုကျ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ဒီနိုင်ငံမှာ ဂိုဏ်တွေရှိပါတယ်။ လုယက်၊အကြမ်းဖက်ခြင်းကို မရှိလို့၊ ဆင်းရဲလို့၊ အလုပ်မရှိလို့ ယူဆနိုင်ပေမဲ့၊ အခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီဂိုဏ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဒါမျိုးလုပ်မှ နေထိုင်၊ စားဝင်၊ အိပ်ပျော်မဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်လို့ သူတို့စိတ်အလိုအတိုင်း လုယက်၊စားသောက်နေထိုင်ကြတယ် ..ဆိုတာသိရပါတယ်။ စိတ်အလိုအတိုင်းနေထိုင်သူများအများစုဟာ စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားမှုကို လိုက်ပြီး အသက်ရှင်နေကြပါတယ်။
နောက်ဆုံး ၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်၊ တခါတလေ တခုခု၊ မကောင်းတာဖြစ်စေ၊ ကောင်းတာဖြစ်စေ စိတ်အလိုကျ လုပ်မိတော့မဲ့ အချိန်မှာ ၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာက တွန်းအားတခုဖြစ်လာပြီး မလုပ်ပဲနေလိုက်မိတာမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကို ဦးဆောင်နေတာ ၀ိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ိညာဉ်ကြီးစိုးတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဘ၀မှာ ၀ိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ခရစ်တော်ရဲ့ ၀ိညာဉ်ရေးကြီးစိုး၊ ကြီးမားမှုကို ဒီ (၃)ရက်တာ စခန်းချချိန်မှာ ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ ၀ိညာဉ်ဆိုးများလည်း ရှိကပါတယ်။ ၀ိညာဉ်ဆိုးများကို ဖယ်ရှားဖို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာ .. ပြသနာတခုဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ပြသနာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတဲ့အခါ .. စိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ မခံချင်တာ၊ မကြေနပ်တာ၊ ဒေါသဖြစ်တာတွေ၊ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ ဖြစ်လာပြီး နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခန္တာကိုယ်ရဲ့ပြုမူချက် (လုပ်ဆောင်ချက်) ဖြစ်လာပါတယ်။ မိမိနေ့စဉ် ရုံးသွားချိန်၊ အလုပ်ထဲမရောက်ခင် ကိုယ့်ရဲ့ဘော့စ်ကို တွေ့လိုက်မိတယ်။ ကိုယ်နဲ့အကြည့်ချင်းဆုံချိန် ဘော့စ်က မိမိကို ပြုံးပြလိုက်ချိန်မှာ၊ မိမိစိတ်ထဲမှာ စဉ်းစားချက်တွေပေါ်လာပါတယ်။ အလုပ်ဖြုတ်ချင်လို့လား၊ တခုခုမကြိုက်လို့လား စသဖြင့် အနှုတ်လက္ခာဏာ Negative Thinking များဝင်လာပါတယ်။
ကိုယ်ဝိတ်ဝိညာဉ် (၃)ပါးမှာ ၀ိညာဉ်ရေးရာ ရင့်ကျက်မှု တရားဒေသနာအကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
၅ယေရှုခရစ်၌ ရှိသော ထိုစိတ်သဘောကို သင်တို့၌လည်းရှိစေ ကြလော့။
၆ထိုသခင်သည် ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဍန်တော်နှင့် ပြည့်စုံ တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်နှင့် ပြိုင်သောအမှုကိုလုယူခြင်းအမှုဟူ၍ မထင်မမှတ်လျက်ပင်၊
၇မိမိအသရေကို စွန့်၍ အစေခံကျွန်၏ သဏ္ဍန်ကို ယူဆောင်လျက်၊ လူကဲ့သို့သောအဖြစ် ၌ဘွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူ၏။
၈ထိုသို့လူ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံလျက်၊ အသခံခြင်းသာမဟုတ်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခြင်းတိုင်အောင် အစေကျွန်ခံ၍ ကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချတော်မူ၏။
၉ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်ကိုအလွန်မြှောက်၍ ဘွဲ့နာမတကာ တို့ထက် ကြီးမြတ်သော ဘွဲ့နာမတော်ကို ပေးသနားတော်မူ၏။
၁ဝအကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင် သတ္တဝါ၊ မြေကြီးသတ္တဝါ၊ မြေကြီးအောက်၌ရှိသော သတ္တဝါတည်းဟူသော ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့သည် ယေရှု၏ ဘွဲ့နာမတော်ကို ဒူးထောက်၍၊
၁၁ယေရှုခရစ်သည် သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ ဟုနှုတ်နှင့် ဝန်ခံသဖြင့်၊ ခမည်းတော် ဘုရား၏ ဘုန်းအသရေတော်ကို ထင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းတည်း။
6 Who, being in very nature God,did not consider equality with God something to be grasped,
7 but made himself nothing,taking the very nature ofaservant,being made in human likeness.
Camp Spiritual Advisors
Rev Latt Yishey
Rev Zauya Lahpai
Rev Dr Naw San Doe
Rev Lone Wah Lazum
Rev Sammy Myo Sett
Dr Raymond Mu (ဆေးဆရာဝန်၊ ဒေါက်တာ)
Camp Pastor: Rev Harold Ho, Committee Chair: Judy Tay, vice Chair: Zarkay Nhkum, Camp Director: Franky Kaw, Secretary: John Hla-Oung, Treasurer: Johnson Paw
Cronicled by Richard Koo
ရိုက်ကူးတင်ဆက်သူ .. ကိုရစ်ချက်
2012 BCA Camp Video Links
http://www.youtube.com/watch?v=NzX1w8nsYfg Part5(2012)
(Camp Praise Song & Sermon - Dr Ramond Mu 12 minutes)
http://www.youtube.com/watch?v=B9j4mCH6mHI Part4(2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e_Qszj3780A Part3(2012)
http://www.youtube.com/watch?v=S2m6Zk8Ippc Part2(2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_ZKTEwS2Hnc Part 17 (2011)
http://www.youtube.com/watch?v=XgyV2EYq4a8 Part 16 (2011)
မှတ်ချက်။ ။ ကာလီဖိုးနီးယားရှိ မြန်မာခရစ်ယာန်များ နှစ်စဉ် ၃ရက် Spiritual Camp by Burmese Christian ကို လွန်ခဲ့သော အနှစ်၂၀ကျော်တွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်မှ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှ မြန်မာခရစ်ယာန်များက စည်းရုံးလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် နှစ်စဉ် (၃)ရက် အဝေးစခန်းချ၊ မိသားစုများ အတူနေထိုင်၊ အိပ်စက်၊ စားသောက်၊ ကျမ်းစာလေ့လာ၊ ၀ိညာဉ်ရေးအတွက် မြန်မာအသင်းတော်၊ မိတ်သဟာရများ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှာပါစေ။ မုရန်